From Wikipedia, vewakasununguka enisaikoropidhiya
Chisingafaniri kuvhiringidzwa anodhinda chidzitiro.
Chinovhara yokudhinda riri kudhindwa nzira hwokuti munhu pajira riya inoshandiswa akatamisa ingi mugomo substrate, kunze munzvimbo dzakaitwa impermeable kuti ingi pedyo ichivharira rakanyorwa mabhii rinowanzodhinda mapepa. A chipande kana squeegee inodedera mhiri chidzitiro kuzadza rakavhurika pajira riya apertures neingi, uye neizvi nesitiroko ipapo kunokonzera chidzitiro kubata substrate kwekanguva pamwe mutsetse kunyorerana. Izvi zvinokonzera kuti ingi kuti inonyorovesa substrate uye ribviswe pakati pajira riya apertures sezvo chidzitiro chinomera shure pashure chipande kwapfuura.
Chinovhara Kudhinda zvakare nzira rakanyorwa mabhii rinowanzodhinda mapepa harichadhindwi rokuita umo namaapuro rinorambidzwa pamusoro nechidzitiro china polyester kana zvimwe pajira riya yakaisvonaka, pamwechete varara nzvimbo zvemapuranga ane impermeable fuma. Ingi anomanikidzwa kupinda pajira riya mawindo parutivi ukaguta chipande kana squeegee uye wetting ari substrate, akatamisira vapinde rokudhinda pemvura munguva squeegee nevanga. Sezvo chidzitiro rebounds kubva substrate ari ingi kunogara pamusoro substrate. It inonziwo esiriki-screen, nechidzitiro, serigraphy, uye serigraph yokudhinda. Mumwe ruvara inodhindwa panguva, sefa saka akawanda anogona kushandiswa pave chifananidzo siyana kana kugadzirwa.
Pane mazwi siyana inoshandiswa pane zvimwe chete unyanzvi. Pachivanhu muitiro yainzi chinovhara kudhinda kana silkscreen yokudhinda nokuti esiriki raishandiswa kwacho asati nokugadzirwa kwakaitwa polyester pajira riya. Pari, chakaita zvokugadzirwa shinda dzinowanzoshandiswa mune chidzitiro nokudhinda. The inonyanya kufarirwa pajira riya vakawanda unoshandiswa kuti polyester. Kune unokosha-kushandisa pajira riya zvinhu zviri zvinhu zvenaironi uye Stainless simbi riwanikwe chinovhara purinda. Kunewo mamwe marudzi akasiyana pajira riya saizi iyo achasarudza zvaizoguma uye tarira pamusoro rapera kugadzirwa pazuva acho.
Kuti uwane enhoroondo chidzitiro yokudhinda, ndapota endai https://en.wikipedia.org/wiki/Screen_printing
Post nguva: May-27-2018